कला साहित्य उत्सवमा भूराजनीतिक वहस « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७५, आईतवार ०७:०७
भद्रपुर । झापाको काँकडभिट्टामा हिजाेदेखि शुरु भएको कला साहित्य उत्सवको अन्तिम सत्रमा ‘भू–राजनीतिक चिन्तन’ विषयमा रोचक बहस भएको छ । बहसमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य एवं जवाहरलाल नेहरु(जेएनयु) विश्वविद्यालयका प्रा महेन्द्र पी लामा र ‘प्रयोगशाला’ पुस्तकका लेखक तथा कान्तिपुर दैनिकका पूर्वसम्पादक सुधीर शर्मा वक्ता थिए ।
युवा पत्रकार वसन्त बस्नेतले सहजीकरण गरेकाे सो बहसमा ‘नेपालमा चीन पसेको हो ?’ भन्ने विषयले प्रवेश पाएको थियो । नेपालमा चीन पस्यो पस्यो भन्छन् नि, तपाइँलाई कस्तो लागेको छ ? प्रस्तोता वसन्त बस्नेतले भारतीय प्रा लामालाई प्रश्न सोधेका थिए ।
सोझोभन्दा घुमाउरो कूटनीतिक जवाफ फर्काउन सिपालु लामाले ‘चीन नेपालमा पस्नु कुनै नौलो विषय होइन’ भने । “केरुङ, तातोपानी र काठमाडौँबाट चीन पसिरहेको उल्लेख गर्दै उत्तरबाट रेल ल्याउन चाहिँ सोचेभन्दा कठिन भएको दाबी गरे । आठ हजार फिटभन्दा माथि उक्लिँदा नै स्याँस्याँ र फ्याँफ्याँ हुन्छ हिमाल नाघेर रेल कसरी ल्याउने होला ?”, लामाले प्रश्न तेस्याए ।
बहसमा सहभागी पत्रकार सुधीर शर्माले नेपालमा चीनको सहयोग फाइदाजनक हुने तर्क पेश गरेका थिए । उनले नेपालले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि आर्थिकरुपमा सम्पन्न चीनबाट फाइदा लिनुपर्ने र त्यसको सम्भावना भएको बताए ।
भारतले दुई वर्षअघि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको चर्चा गर्दै शर्माले चीन पसेर भारतलाई किनारा लगाउला भन्ने डरले नै भारतीय संस्थापनले पछिल्लो समय नेपालसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन कसरत गरिरहेको धारणा व्यक्त गरे ।
“नाकाबन्दी लगाउनु गल्ती थियो भनेर भारतले अहिले महसुस गरिसकेको छ”, शर्माको तर्क छ, “यसको एउटै कारण छ, नेपालमा चीन पस्ने भारतको डर ।” नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा भारत विरोधी जनमत बढेको र त्यसकै बलमा कम्युनिष्ट सत्तामा पुगेकोसमेत भारतले महसुस गरेको उनको धारणा थियो ।
नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै चीन पसिरहेको र उसलाई रोक्न प्रयास पनि भइरहेको भारतका नेपालविज्ञ लामाले कार्यक्रममा बताए । प्रत्येक दुई वर्षको अन्तरालमा आयोजना हुँदै आएको यसपटकको उत्सव चौथो संस्करण हो ।
िहजाेदेखि फागुन २० गतेसम्म सञ्चालन हुने उत्सवमा विचार विमर्शदेखि विभिन्न कविता वाचन, चित्रकला प्रतियोगिता र चरा संरक्षणका लागि तस्बीर प्रदर्शनी गरिएको आयोजक रिडर्स झापाका अध्यक्ष उज्ज्वल प्रसार्इंले बताए ।
पहिलो दिनकै सत्रमा ‘समकालीन आख्यानमा वर्गचेत’ शीर्षकमाथि पुण्यप्रसाद खरेल, सरस्वती प्रतीक्षा र रेमिका थापाबीच बहस भएको थियो । सो बहसको सहजकर्ता दीपक सापकोटा रहेका थिए । त्यसपछिको सत्रमा ‘अभिव्यक्ति र बहीष्करण’ शीर्षकमा अनुभव अजित, नयनराज पाण्डे र सुप्रिया मानन्धरले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रमको सहजकर्ता बन्दना ढकाल थिए । कार्यक्रममा देही आर्टको आयोजनामा विद्यार्थीले बनाएका चित्रको प्रदर्शनी गरिनुका साथै दर्शकले मन पराएको चित्रमा मत दिने व्यवस्थासमेत मिलाइएको थियो ।
दर्शकले दिएको मतका आधारमा उत्कृष्ट चित्रलाई पुरस्कृत गरिने देही आर्टका छितेन शेर्पाले जानकारी दिए । साँझ परिवर्तन थिएटरले ‘बिटुलो आख्यान’ नामक नाटक मञ्चन गरेको थियो ।
मेची सामुदायिक भवनमा नाटक हेर्न आउने दर्शक खचाखच भरिएको परिवर्तन थिएटरकी कविता नेपालले बताए । सो नाटक रिडर्स झापाका अध्यक्ष उज्ज्वल प्रसार्इंले लेखेका हुन् ।
गजल : रहर यो तिम्रो लागि
कोहलपुरमा सुनिए कवि वि.पि. अस्तु र सुनिता खनाल !